အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ? #1 ဝန်ထမ်းများရဲ့ Negative Feeling တွေမှာပါဝင်ပါ | Mycanvas
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ? #1 ဝန်ထမ်းများရဲ့ Negative Feeling တွေမှာပါဝင်ပါ
အလုပ်မှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ စိတ်ရှုပ်စရာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ယောက်က Negative Feeling တွေခံစားနေရတယ်ဆိုရင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး တိုးတက်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ အတိအကျပြောရရင်တော့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ Negative Feeling တွေကြောင့် တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်ကိုပါအဆိုးမြင်အတွေးတွေသက်ရောက်စေနိုင်တဲ့အတွက် တချို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက ထိုဝန်ထမ်းကို “ပြဿနာတစ်ခု” လို့မှတ်ယူတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း Negative Feeling တွေကနေ Positive Motivation အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ အဲ့ဒီ့ဝန်ထမ်းကို Positive အတွေးနဲ့ပြန်တွေးနိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ၀ န်ထမ်းများကို စိတ်ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အချက်မှာ ဘယ်လိုကောင်ကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပါတ်မှာတော့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Negative Feeling တွေကို ပြောင်းလဲပစ်စေနိုင်ဖို့အတွက် အပြုသ‌ဘောဆောင်တဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်း ၃ချက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Tip #1 ဝန်ထမ်းများရဲ့ Negative Feeling တွေမှာပါဝင်ပါ
Negative Feeling တွေမှာပါဝင်ခြင်းဆိုတာဟာ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုစာနာနားလည်းပြီး အဲ့ဒီ့ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောဆိုခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့ဟာ သူတို့ဝန်ထမ်းတွေအား Negative Feeling တွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ဒါမှမဟုတ် မေ့ပျောက်နိုင်ဖို့တွန်းအားပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း အဲ့လိုဖြေရှင်းနည်းတွေကမထိရောက်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲ့ဒါဟာ ဝန်ထမ်းကိုအပြင်ပန်းအနေနဲ့ပဲ အားပေးစေနိုင်ပြီး စိတ်ထဲမှာတော့ Negative Feeling တွေ ခံစားနေရဆဲဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ ထမ်းများထံမှမကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုများကြောင့်ရာထူးလျှော့ချခံရတယ်ဆိုပါစို့။ အဲ့ဒီအခါမှာ co-worker က “စိတ်မပူပါနဲ့, အဆင်ပြေသွားမှာပါ, မင်းကိုယ်မင်းအပြစ်မတင်ပါနဲ့” လို့ပြောရင် ရာထူးလျှော့ချခံရတဲ့ဝန်ထမ်းက “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဆိုတာကလွဲပြီးဘာမှပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ဒီရာထူးလျှော့ချခံရတဲ့ဝန်ထမ်း Negative Feeling ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးမပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားတစ်ဖက်အနေနဲ့ လူတွေကကိုယ်ချင်းစာဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် စိတ်ပျက်အားငယ်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဟာ သူ / သူမအခုဘယ်လိုခံစားနေလဲဆိုတာကို ပြောပြဖို့ပိုပြီးအခွင့်အရေးရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အတွေးများကိုထုတ်ဖော်ပြောပြီးနောက်မှာတော့ ထိုဝန်ထမ်းဟာ ပြန်ပြီး Recover ဖြစ်လာနိုင်ပါတဲ့အတွက် ဒီနည်းလမ်းဟာ အဖွဲ့၀င်များအတွက်ထိရောက်နိုင်ပါတယ်။
သင်ရော သင့်ရဲ့လုပ်‌ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ စိတ်ဓါတ်ကျအားငယ်နေတဲ့အခါဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့အားပေးစကားပြောလေ့ရှိသလဲ?